ch2မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch2မာကု
2:1 ထိုအခါအချို့ရက်အကြာမှာ, သူသည်နောက်တဖန်ကပေရနောင်သို့ ဝင်..
2:2 ထိုသို့အိမ်၌ရှိတော်မူကြောင်းကိုကြားရ၏. နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအဘယ်သူမျှမအခန်းကိုလက်ဝဲရှိကွောငျးကိုစုဝေးစေ, မပေးတောင်မှတံခါးနားမှာ. ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြောသော.
2:3 ထိုသူတို့အထံတော်သို့ လာ. ,, တစ်ဦးလက်ခြေသေသောသူဆောင်ခဲ့, သူကိုလူလေးယောက်ကသယ်ဆောင်လျက်ရှိခဲ့သည်.
2:4 ထိုသူတို့ကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူအစုအဝေး၏အထံတော်သို့သူ့ကိုဆက်သဖို့မတတျနိုငျသောအခါ, ကိုယ်တော်ရှိရာခေါင်မိုးအဝတ်မခြုံဘဲ. ထိုသို့ဖွင့်လှစ်, သူတို့ကလက်ခြေသေသောသူသည်မုသာစကားကိုခဲ့သည့်အပေါ်ထမ်းစင်ကိုဆင်းလျှော့ချ.
2:5 ထိုအခါ, ယရှေုသညျထိုသူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုမွငျသောအခါ, သူသည်လက်ခြေသေသောသူအားမိန့်, "သားတော်သည်, သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်နေကြတယ်။ "
2:7 "အဘယ်ကြောင့်ဤသူသည်ဤနည်းဖြင့်စကားပြောဖြစ်ပါတယ်? သူကဘုရားကိုလွန်ကျူးနေသည်. အဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွှတ်နိုင်, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်တပါးတည်းသာလျှင်?"
2:8 တစ်ကြိမ်, ယရှေုသညျ, သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွင်းကဒီစဉ်းစားခဲ့သညျမိမိ၌စိတ်ဝိညာဉ်အားသဘောပေါက်, ထိုသူတို့အားပြောဆို: "အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုအမှုအရာတို့ကိုစဉ်းစားနေကြတယ်?
2:9 ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်သော, လက်ခြေသေသောသူမှပြော, '' သင်၏အပြစ်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်နေကြတယ်,'သို့မဟုတ်ပြောစရာ, '' ထလော့, သင့်ရဲ့ထမ်းစင်ကိုတက်ယူ, နှင့်လမ်းလျှောက်?''
2:11 "ငါအမှနျဆိုသညျကား: ထလော့, သင့်ရဲ့ထမ်းစင်ကိုတက်ယူ, နှင့်သင်၏အိမ်ထဲသို့သွားပါ။ "
2:12 ထိုသူသည်လည်းချက်ခြင်းထ, နှင့်သူ၏ထမ်းစင်ကိုချီ, သူကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာသို့သှားကွ၏, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩဒါ. ထိုသူတို့သညျဘုရားသခငျဂုဏ်ပြု, ဟု, "ကျနော်တို့ကဤကဲ့သို့သောမျှမမြင်စဖူးဘူး။ "
2:13 သူသည်ထိုအပင်လယ်မှတဖန်ထွက်ခွာခဲ့သည်. ထိုအခါတစျခုလုံးကိုလူအစုအဝေးအထံတော်သို့ လာ. ,, သူကသူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်.
2:14 ထိုမင်းသည်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, သူကအာလဖဲလေဝိသည်ကိုငါမြင်၏, အဆိုပါအကောက်ခွန်ရုံးထိုင်နေသည်. သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, "ငါ့နောက်သို့လိုက်။ " ထိုအထ, သူသညျလိုကျ.
2:15 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူသညျမိမိအိမျ၌စားပွဲ၌ထိုင်, များစွာသောအခွန်ခံများနှင့်ဆိုးသောသူတို့သညျယရှေုနှင့်သူ၏တပည့်များနှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်လျက်. သူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်သောသူတို့အားများစွာသောခဲ့ကြသည်များအတွက်.
2:16 ထိုအခါကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့, သူသည်အခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားကိုမြင်လျှင်, ပည့်တော်တို့အားမိန့်, "ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ဆရာအခွန်ခံများနှင့်ဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားသောက်ခြင်းပါဘူး?"
2:17 ယရှေုသညျ, ထိုစကားကိုကြားတော်မူပြီးမှ, ထိုသူတို့အားပြောဆို: "ဒီကျန်းမာဆရာဝန်တစ်ဦး၏စရာအကြောင်းမရှိ, ဒါပေမယ့်ရောဂါရှိသူတို့လုပျ. အဘို့ငါပဲခေါ်ခြင်းသို့မလာဘဲ, ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့။ "
2:18 ယောဟနျ၏တပည့်, ဖာရိရှဲတို့သည်, အစာရှောင်ခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကရောက်လာပြီးကလညျး, "အဘယ်ကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းယောဟန်၏နှငျ့ဖာရိရှဲ၏တပည့်ပြုပါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့တပည့်အစာမရှောင်ပြုပါ?"
2:19 ထိုအယေရှုက: သတို့သားသူတို့နှင့်အတူနေဆဲဖြစ်ပါသည်စဉ် "ကိုဘယ်လိုမင်္ဂလာဆောင်အစာရှောင်ခြင်း၏သားနိုင်? ဘာပဲအချိန်အတောအတွင်းသူတို့နှင့်အတူသတို့သားများ, သူတို့သည်အစာရှောင်နိုင်ကြမဟုတ်.
2:20 သတို့သားသူတို့ထံမှသိမ်းယူလိမ့်မည်သည့်အခါသို့သော်လက်ထက်၌ရောက်လာပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌.
2:21 အဘယ်သူမျှမဟောင်းအထည်ချုပ်ပေါ်သို့အသစ်သောအထည်တစ် patch ကို sews. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အသစ်ကများအပြင်ဝေးအဟောင်းကနေခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, နှင့်မျက်ရည်ပိုဆိုးဖြစ်လာ.
2:22 အဘယ်သူမျှမဟောင်းသားရဘေူး၌အသစ်သောစသောစပျစ်ရည်ကိုထည့်လေ့မရှိ. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, စပျစ်ရည်ကို၎င်းသားရဘေူးကွဲပါလိမ့်မယ်, နှင့်စပျစ်ရည်ကိုသွန်းလောင်းမည်, နှင့်သားရဘေူးကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်. အဲဒီအစား, အသစ်သောစပျစ်ရည်ကိုအသစ်သောသားရေဘူးထဲသို့သွင်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ "
2:23 တဖန်တုံ, သခင်ဘုရားသည်ဥပုသ်နေ့၌မှည့်သောစပါးကိုတဆင့်လမ်းလျှောက်နေစဉ်, တပညျ့တျောတို့သ, သူတို့ချီတက်အဖြစ်, အစေ့၏နားရွက်ကိုခွဲခြားရန်စတင်.
2:24 ဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့ကဆိုပါတယ်, "အကယ်, အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကဥပုသ်နေ့အပေါ်အပ်မဘာလုပ်နေပါလဲ?"
2:25 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်သည်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုဖတ်ဘယ်တော့မှဖူး, သူကလိုအပ်နှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခဲ့ပြီးမှ, သူနှင့်သူ၌ပါသောသူတို့အားနှစ်ဦးစလုံး?
2:26 ဘယ်လိုသူသညျဘုရားသခငျ၏အိမ်တော်သို့ ဝင်., ယဇ်ပုရောဟိတ်အဗျာသာအောက်မှာ, နှင့်ရောက်ရှိခြင်းမုန့်ကိုစားကြ၏, ဒါကြောင့်အစာစားအပ်မဟုတ်ခဲ့သည့်, ယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့အ မှလွဲ., သူသူနှင့်အတူဖြစ်နှင့်သောသူတို့အားပေး၏ဘယ်လို?"
2:27 ထိုသူတို့အားဆို၏: "ဒီဥပုသျနေ့သည်လူအဘို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, နှင့်ဥပုသ်နေ့အဘို့လူမ.
2:28 ဆိုတော့, လူသားသည်မိနျ့တျောမူ၏, ပင်ဥပုသ်၏။ "
အောက်တိုဘာလ 22, 2019